Dutchtown တိုးတက်မှုမန်နေဂျာ• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
ကျေးဇူးပြု၍ ဒီနေရာကိုဖြည့်ပြီးကြောင်းသတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown Growth Manager, Jessica Payne နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် jessica@dutchtownstl.org.
Dutchtown မြို့လယ်နှင့်အတူလက်တွဲ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, ပထမ ဦး ဆုံး Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာဖြစ်လာဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်သောရပ်ရွာတည်ဆောက်သူကိုရှာသည်။ ဤအနေအထားသည် Downtown Dutchtown နှင့် Dutchtown Community Improvement District အားအားထုတ်မှုအသစ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီလိမ့်မည် မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု'' s ကို UrbanMain ရှေ့ပြေးအစီအစဉ် ကြောင်း Dutchtown အတွက်အကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။
Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာသည် Dutchtown တွင်စီးပွားရေးစီမံကိန်းများနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်း၊ စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့် Main Street ၏လေးမှတ်ချဉ်းကပ်မှု (စီးပွားရေးတက်ကြွမှု၊ ဒီဇိုင်း၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်မြှင့်တင်မှု) တို့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ မြင့်မားသောစနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားခြင်း၊ နည်းပညာပါးနပ်သူဖြစ်ပြီး UrbanMain Pilot အစီအစဉ်နှင့် Dutchtown အသိုင်းအဝိုင်း၏ရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်စနစ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်များကို ဖန်တီး၍ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ UrbanMain ရှေ့ပြေးအစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်အတူ, Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အဖြစ်အပျက်ဆိုင်ရာကြိုးပမ်းမှုများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအကူအညီများပေးအပ်ရန်တာဝန်ရှိသည် ဒိန်းမတ်။ ထောက်ပံ့ငွေအရေးအသားနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွေ့အကြုံကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မည်။
Downtown Dutchtown (DT2) သည်အမြတ်အစွန်းမယူသောရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (၅၀၁) (ဂ) (၃) ဖြစ်သည်။ DT501 ၏မစ်ရှင်သည်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်အတွင်းအခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်သာယာဝပြောမှုမျှဝေခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤတာ ၀ န်အားဖြင့် DT3 သည်ကွဲပြားသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆွဲဆောင်ရန်၊ နေရာများ၊
Dutchtown Community Developmentment District (DTCID) ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန် ၉ ရက်တွင်ပြဌာန်းချက်အမှတ် ၇၀၅၅၉ အဖြစ်တရားဝင်အတည်ပြုပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်တရားဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ DTCID နယ်နိမိတ်အတွင်းရှိပိုင်ရှင်များသည် DTCID ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အားအဓိက ဦး စားပေးသုံးခုဖြစ်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေး၊ လုံခြုံရေး၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အလှအပနှင့်စျေးကွက်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုကျူးလွန်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အထူးအိမ်ခြံမြေအခွန်အကဲဖြတ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် နိုဝင်ဘာလ 15th, 2020 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown ကြီးထွားမှုမန်နေဂျာ